ပဲခူးမှာ စစ်တပ်က သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ် Bago | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ပဲခူးမှာ စစ်တပ်က သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ် Bago
ပဲခူးမှာ စစ်တပ်က သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ် Bago
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Sep 5, 2010 in Myanma News | 14 comments
စက်တင်ဘာ ၅ ရက် ဒီနေ့ နေ့စွဲနဲ့ ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင် မှာ မအေးအေးမာ တင်ထားတဲ့ ပဲခုး သတင်းပါ။ ပွိုင့်ရဖို့ မရည်ရွယ်ဘဲ ပြည်တွင်းသတင်း မသိသေးသူ အများ သတိပြုမိစေရန်ပါ။
By မအေးအေးမာ တနင်္ဂနွေ, 05 စက်တင်ဘာ 2010
တစ်ချိန်က ငရဲခွေးကြီးလွတ်နေပြီလို့ ရေးခဲ့တယ်ဗျာ..
အခုအိမ်တွင်းက ငရဲခွေးကြီးက သောင်းကျန်းနေပြီဗျ
မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုကိုအကာအကွယ်ပေးတဲ့ပြည်သူ့တပ်မတော်ဆိုတာ မရှိတာကြာပါပြီ ဦးနေဝင်းလက်ထက်ကစလို့ပျက်စီးသွားတာပါ ခုချိန်မှာတော့သန်းရွှေနဲ့အပေါင်းပါတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ သန်းရွှေတပ်မတော်ဖြစ်နေပါပြီ ပဲခူးမှာဖြစ်တဲ့ရပ်ကတော့တရားလွန်လွန်းလှပါတယ် ဖြစ်နိုင်တဲ့နည်းနဲ့တုံ့ပြန်ဘို့ကောင်းပါတယ် ငြိမ်ခံနေယင်ပိုယောက်တက်လါလိပ်မယ်။။
စစ်တပ်နဲ့ သူပုန် ကွဲပြားမှုဆိုတာ ဘာလဲ?
လုပ်ချင်ရာလုပ်လို့ ရတယ်ဆိုတဲ့ စိတ် က ဘာကြောင့်ပေါ်လာရတာလဲ?
aung linn thu says:
ဒုံကျည်နဲ့ ပစ်ခံရရင်တောင် အစရှာလို့ ရချင်ရမယ်…. မြေမြို ခံရရင် ဘာမှ မရတော့ ဝူးဗျ…. ကျေးဇူးရှင်တွေ ကို ကျေးစွတ်လို့ လေ…
video take htar tar kyi chin yin taw.dlink mar kyi par http://www.dawnmanhon.com/2010/09/blog-post_4991.html
မစာနာတတ်လိုက်ကျတာ…သေဆုံးသူမိသားစုတွေရဲ့ သောက ကိုစဉ်းစားကြည့်ကြပါ …မကျေနပ်လို့ ကောဘာမှပြန်မလုပ်နိုင်တဲ့ဘ၀..ကိုယ့်နှလုံးသွေးကိုထုပ်ယူသွားတာတောင်မတုန့် ပြန်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ ….ကြားရတာရင်နာရပါတယ်
မင်းတို့ ဆိုးချင်တိုင်းဆိုးပြီး မတရားမှုတွေကို မင်းတို့လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်နေကြတာကို ငါတို့ပြည်သူ၊ ပြည်သားတွေမှာ အကြောက်တရားနဲ့ လက်ပိုက်ကြည့်နေခဲ့ရတာကြာခဲ့ပါပြီ..။ မင်းတို့စစ်အာဏာရှင်တွေ ခေတ်မှာ တရားကို နတ်တောင်မစောင့်ရဲပဲ ဖြစ်နေပေမဲ့..။ အေး ဒီတစ်ခါတော့ မင်းတို့တစ်တွေ ကျဆုံးချိန်ကို ရောက်လာနေပါပြီ..။ တရားကို နတ်မစောင့်ရဲပေမဲ့..။ မင်းတို့ ယခုမတရားမှုတွေကိုတော့ အများပြည်သူ၊ပြည်သားတွေက မျက်ကွယ်မပြုကြတော့ပါဘူး..။
ယခုတပ်မတော် တိုင်းပြည်ကို မင်းမူကာ ရောင်းစားရန်
ယခုတပ်မတော် ပြည်သူတွေကို သတ်ဖြတ်ရန်
ယခုတပ်မတော် ပြည်သူတွေ ရွံရှာ စက်ဆုပ် မုန်းတီးသောတပ်မတော်….
ဟိုတုန်းကတပ်မတော် ပြည်သူအတွက် အသက်ပေးသောတပ်မတော်
ယခုတပ်မတော် ပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကို ပေးဆပ်ရသော တပ်မတော်
ကျွန်တော် တပ်မတော်သားမဖြစ်ရတဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူမိပါတယ်……
aww….. Lat khout so tar2bet tee mah myee tar par. De laut kyi anyoe ta kyi nae. phyit ya lout ag thu ka lal bar thwar pyaw mhan mah ma ti tar. D lo pyaw loh Na Ah Pha bet taw thar loh taw. ma htin par nae. . Sae lal ma sae kya par nae. ohn nor. Thu toe. bet ka mah ywae kaut pwal nee nay taw. pyat ta nar bal phyit chin ma lal. Nyi ma lay ka taw. Nyi ma lay nar lal ta lout write tar nor.2bet lone ka mhar tar par. Ho Bet ka lal bal lout pae sait soe soe de lo kyi taw. ma loat thint par Bu.2Bet lone ko koe chin sar par tal . Wall ko Head nae tite yin bal har ka kwal mal htin lal. Sin sar pyi nay kya port. De lo write tar ka arr lone atwet par. Koe History ko pae write kya tar lay . Koe kyaunt koe family doat kha yout ag ma loat kya par nae.
” Wisdom is the art of knowing what to fight for and what to simply overlook ”
Bawa sat tai mhar Bal thu mah de lo aphyit soe kyi nae. htet ma twae. nai kya par say nae loh su tg pay lite par tal.
Family2ku sa lone nae htet tu htet mhya khan sar ya par tal
bar pyaw pyaw lay …. Gun nae shot taeahti dot ma phit thint bu lay . hote tal mhat lar ?